वलिउडको ‘बोस’ नेपाल किन आएन ? « THULOPARDA.COM: Entertainment News Portal From Nepal
वलिउडको ‘बोस’ नेपाल किन आएन ?
Published On : October 18, 2013
ठुलोपर्दा डटकम, काठमाण्डौ। भारतमा बुधवार रिलिज भई शुक्रबार ‘वर्ल्ड रिलिज’ प्रतिक्षित वलिउड चलचित्र ‘बोस’ नेपालमा रिलिज हुन पाएन। ‘बोस’ हेर्न हल पुगेका दर्शक निराश भए। कोहिले त्यसको सट्टा ‘साहिद’ हेरे भने कोहि नेपाली चलचित्र ‘स्टार’ तिर लागे। त्यसो त शुक्रवार रिलिज भएको नेपाली चलचित्र ‘स्टार’लाई बोसका केहि दर्शक पक्कै गएका छन् तर बोस रिलिज नभएपनि यो साता पूर्ण नेपाली चलचित्रमय भने हुन सकेन।
बोसको सट्टा दर्शना आर्ट्सले ‘साहिद’ रिलिज गर्यो। दर्शना आर्टसका शुरेस दर्पण पोखरेलका अनुसार ‘बोस’ नचल्नुमा आर्थीक मामला हो। तीस लाख भारतिय रुपैयाँभन्दा कममा बोस नआउने भएपछि सानो बजेटको ‘साहिद’ ल्याईएको हो। ‘प्रतिस्पर्धी कुनै अर्को कम्पनीले पहिले नै साढे बत्तीस लाख रुपैयाँ दिने भनेको रहेछ। हामीले २७ लाख भन्दा दिन नसक्ने जिकिर गर्यौँ तर अन्तिममा तीस लाख भारतिय रुपैयाँभन्दा कममा नदिने भएपछि साहिद ल्याएका हौँ’ पोखरेलले ठुलोपर्दा डटकमसँगको कुराकानीमा बताए। संसारको सबैभन्दा ठुलो पोस्टर बनाएर माईकल ज्याक्सको वर्ल्ड रेकर्ड तोडेको ‘बोस’मा अक्षय कुमार मूख्य भुमिकामा छन्।
हन्सल मेहता निर्देशित बायोग्राफिक चलचित्र साहिदमा सन् २०१० मा मुम्बईमा हत्या गरिएका मानवअधिकारवादी तथा कानुन व्यवसायी साहिद आजमीको कथामा बनेको छ।अनुराग कश्यपको निर्माण रहेको यो चलचित्र टोरन्टो फिल्म फेस्टिभलमा प्रदर्शन भईसकेको छ।
तेस्रो हप्तामा पनि ‘कठपुतली’ लाई दर्शकको साथ
पुष १६ गतेबाट प्रदर्शनमा आएको चलचित्र ‘कठपुतली’ ले दर्शकबाट उत्कृष्ट प्रतिक्रिया बटुलिरहेको छ । यसै
‘एक्स ९’ भन्दा अगाडि अनमोलले ‘पारस’ गर्ने
नेपाल र भारतका चर्चित कलाकारलाई लिएर निर्माण हुन लागेको चलचित्र ‘एक्स ९’ का लागि विगत